Somali News 09.16.21 | KWIT
Xeer -dejinta ayaa markaa loo qorsheeyay inay ku kulmaan kalfadhi gaar ah oo ka bilaaban doona Oktoobar 5 si ay u tixgeliyaan soo jeedinta koowaad.
Hoggaamiyeyaasha sharci -dejinta ee labada dhinac ayaa sheegay inay dib -u -eegayaan khariidadaha. Sharci -dajiyayaashu waxay kaliya oggolaan karaan ama diidi karaan khariidadihii ugu horreeyay iyadoon wax laga beddelin.
Dhismuhu wuxuu ka bilaabmayaa warshad Nebraska ah oo dib u dhigi doonta dufanka xoolaha si ugu dambayn loogu beddelo shidaalka naaftada la cusboonaysiin karo. Xarunta JST Global waa iskaashi ka dhexeeya Tyson Foods 'iyo Jacob Stern & Sons. Waxaa lagu dhisi doonaa 6.5 acres oo ku xigta warshadda hilibka lo'da ee Tyson ee Magaalada Dakota. Dhismuhu wuxuu bilaabmayaa toddobaadkan, iyadoo qorshuhu yahay in la hirgeliyo dhammaadka 2022 -ka.
South Dakota waa mid ka mid ah afarta gobol, oo ay weheliso Degmada Columbia, oo aan dib u dejin u sameyn doonin mid ka mid ah ku dhawaad​​37,000 oo reer Afgaanistaan ​​ah oo ka soo qaxay Mareykanka intii lagu jiray maalmihii ugu dambeeyay ee ka bixitaankii qasnaa ee Afghanistan bishii hore.
Adeegyada Bulshada ee Lutheran ee Koonfurta Dakota, oo ah hay'adda dib -u -dejinta qaxootiga ee gobolka, ayaa go'aansatay inaysan aqbalin wax Afgaanistaan ​​ah kadib markay miisaantay xaaladaha maxalliga ah iyo awooddeeda dib -u -dejin. Qaar badan oo ka imanaya Afgaanistaan ​​hadda uma qalmaan inay shaqeeyaan ama helaan gargaar federaal ah si looga caawiyo dib -u -dejinta.
Iowa ayaa la filayaa inay ka hesho 695 qof oo reer Afgaanistaan ​​ah oo ka soo qaxay kooxdii ugu horreysay ee soo degtay ee dib u dejin loogu sameeyo Maraykanka. Nebraska waxay filaysaa in ku dhawaad ​​775 qof laga daadgureeyo.